Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iPhone SMS / MMS
Soo Celinta SMS / MMS ka iPhone 6?
Hi. In kasta oo aan iska on Malabka ahaa, waxaan halabuurka ahaa MMS ah oo si lama filaan ah oo aan screen iPhone tegey madow iyo billaabeen ... phone muuqatay ka dib markii ganaax, laakiin markii aan hubiyaa taariikh aan fariin SMS dhan / MMS la tirtiray. Dhammaan waxyaalaha kale ee ahayd ay macneheedu tahay. Midkiinna ma yaqaan waxa aan u baahanahay in la sameeyo si loo soo celiyo kaliya SMS / MMS ka iPhone macruufka 9 ah?
Haddii aad synced aad iPhone la Lugood, run ahaantii aad u soo celin karto gurmad Lugood, laakiin waxa ay dib u soo celineysa wax walba. Haddii aad rabto in la soo celiyo aad SMS / MMS, waxaad u baahan tahay in ay ku tiirsan ah qalab kabashada iPhone oo kaa caawin kara in aad ka bogsato aad iPhone content kaga imaanayo eegista.
Ma jirto baahida loo qabo in la helo software sida meel kasta oo kale, kaliya waxa ay halkan ka heli: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) , ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows). Software awood aad Macdan iyo kabsado iPhone MMS / SMS gudahood 2 tallaabooyinka, oo aad ku eegaan kara waxa ku qoran oo dhan ka hor inta soo kabashada. Ma doonaysaa in ay hubiso faahfaahinta? Akhri.
Fiiro gaar ah: Hadda, labada Windows iyo Mac versions of software ogolaan in aad si toos ah u soo kabsado files ka iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS aan gurmad file.
Next, aynu soo kabsado SMS / MMS ka iPhone la Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) talaabo talaabo ah.
Tallaabada 1. Warbixiinta Lugood gurmad u tirtiray iPhone MMS
Ka dib markii socda qalab ku on your computer, waxaad heli doontaa suuqa kala aasaasiga ah sida soo socota. Waxaad u baahan tahay in ay doortaan hab soo kabasho hore.
Ka dib markii xulashada "kabsado file backuo Lugood" mode, oo dhan Lugood gurmad faylasha lagu soo saaro oo soo bandhigay liiska. Dooro mid ka mid ah si aad u iPhone oo taga si soo socda adigoo gujinaya "Start Scan" button.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray iPhone MMS ka gurmad
Ka dib markii dhowr gurmad ah, waxa ku jira oo dhan ayaa la soo saaro faahfaahin. Waxaad ku eegaan karo mid ka mid ah oo dhan ka kooban oo ay ka mid. Wixii SMS / MMS, dooro "Messages", waxaad ku eegaan karo dhammaan faahfaahinta, sawiro uncluding, video iyo files audio. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto ka dibna riix "Ladnaansho". Waxaad badbaadin karo fariimaha soo kabsaday si folder deegaanka ka mid ah.
Haddii aad isticmaalayso Windows computer ah, waxaad isku deyi kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo kabsado fariimaha aad ee qaar ka mid ah tallaabooyinka la mid ah, ama si toos ah waxaad isticmaali kartaa barnaamijka baarista, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 ama iPhone 3GS ceshan Xogta laga helay qalab haddii aadan haysan gurmad Lugood ah.
> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iPhone MMS